FJKM Ampahibato Firaisana: "Minoa an’ i Jesoa Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao."
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Ilay zazalahy saika latsaka tao an-davaka
Asan'ny Apostoly 16:31Asan'ny Apostoly 16:31
"Minoa an’ i Jesoa Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao."
Indray andro dia nisy zazalahikely anankiray nandeha tany anaty ala. Nahita goavy vokatra sy masaka izy ary nihazakazaka handeha haka teo, kanjo tsy hitany fa teo akaikin'io foto-goavy io nisy hantana anankiray izay toa voatototry ny bozaka teo amin'ny sisiny. Rehefa nanitsaka teo ambonin'ilay lavaka izy dia nianjera, kanefa tsy tena latsaka tanteraka, fa nahafikitra tamin'ny hazokely anankiray naniry teo. Tsy afaka ny ho tafavoaka irery teo amin'izay izy nihantona teo izay anefa izy fa mila fanampiana, ka hany heriny dia niantso vonjy.
Rehefa elaela niantso vonjy izy dia nisy lehilahy anankiray nahita azy, ary somary taty ambanin'ilay zazalahikely no nisy azy, izany hoe tsy avy teny ambonin'ilay hantsana izy fa tety amin'ny sisina, ary teto ambanin'ilay nisy nihantonan'ilay zazalahy.
- "Avotsory ny tànanao", hoy izy, "fa hotantazako ianao".
Tsy nety namotsotra mihitsy ilay zazalahy anefa satria ilay olona milaza ho mpamonjy azy tsy hitan'ny masony, ary natahotra izy sao ho faty ao amin'ilay lavaka ao raha tsy voarain'ilay mpamonjy Dia lany teo ny fotoana, ka ela dia ela vao nisy olona iray hafa nahita azy mianaka, nanazava tamin'ilay zazalahy hoe afaka mamonjy anao anie io lehilahy io raha avotsotrao ny tànana dia hotantazany ianao e!
Toy izany koa ny fianantsika, olom-bery sy mendrika ho faty ka mila ny famonjen'i Jesoa Kristy. Tsy afaka ny handray izany famonjena izany anefa isika raha tsy mino Azy, sy mino fa mahavonjy antsika tokoa Izy.ha
"Minoa an’ i Jesoa Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao."
Indray andro dia nisy zazalahikely anankiray nandeha tany anaty ala. Nahita goavy vokatra sy masaka izy ary nihazakazaka handeha haka teo, kanjo tsy hitany fa teo akaikin'io foto-goavy io nisy hantsana anankiray izay toa voatototry ny bozaka teo amin'ny sisiny. Rehefa nanitsaka teo ambonin'ilay lavaka izy dia nianjera, kanefa tsy tena latsaka tanteraka, fa nahafikitra tamin'ny hazokely anankiray naniry teo. Tsy afaka ny ho tafavoaka irery teo amin'izay izy nihantona teo izay anefa izy fa mila fanampiana, ka hany heriny dia niantso vonjy.
Toy izany koa ny fiainantsika, olom-bery sy mendrika ho faty ka mila ny famonjen'i Jesoa Kristy. Tsy afaka ny handray izany famonjena izany anefa isika raha tsy mino Azy, sy mino fa mahavonjy antsika tokoa Izy.